Ngatidzidzei nezvePakati pe80 (inozivikanwawo sePakati pe80 kana polysorbate 80) uye Pakati pe20 (inozivikanwawo sePakati pe20) nenzira nhatu dzakasiyana
1 Iko kwekutanga kwePakati pe80 kunobva pakuisa polymerization yeasaturated sorbitol monooleate uye ethylene oxide. Synthesis yePakati pe20: musanganiswa we polyethylene glycol uye chikamu che polyethylene glycol. Pakati pe80 mhando yepolyol nonionic surfactant, iyo inowanzo shandiswa polysorbate. Inoshandiswa zvakanyanya mumvura, semi-yakasimba uye yakasimba kugadzirira, senge O / W emulsifier, solubilizer, wetting mumiriri, dispersant uye stabilizer.
2. Pakati pemakumi maviri anoshandiswa: kune condensation yedhisiki uye ethylene oxide, nekuti mamorekuru ayo ane akawanda hydrophilic polyoxyethylene mapoka, saka ine yakasimba hydrophilicity, seisina-ionic sipo. Inowanzo shandiswa seO / W emulsifier, inogona kushandiswa pamwe chete negumi nembiri alkyl sulphate kana span mhando emulsifier kugadzirisa kugadzikana kwe emulsion. Inogona zvakare kushandiswa seyakagadzirisa mimwe mishonga. Hunhu hwePakati pe80: iyo peroxide kukosha kwePakati pe80 haipfuuri gumi, inova yero yakajeka kune orenji viscous mvura; kanonhuwirira zvishoma. Zvishoma zvinovavira kuravira, kune inodziya kunzwa. Iyo inonyungudika mumvura, ethanol, methanol kana ethyl acetate, asi yakanyungudika mumaminerari mafuta.